Yini okusho ukuthi izikweleti ezimbi? Incazelo encwadzini yezezimali
Qala ukubolekisa Wiki Imalimboleko engalungile
1 Imalimboleko engalungile
1.1 Lezi zinhlobo ezimbili zemalimboleko engalungile
1.1.1 Isimiso semalimboleko engalungile yesibambiso semalimboleko yesakhiwo
1.1.1.1 Izibophezelo zomboleki uma kwenzeka umbolekisi omubi wokonga imali yokwakha
1.1.2 Isimiso sokubolekisa okungalungile kwabazuzi abancane
1.1.2.1 Imithwalo yemboleko uma kwenzeka umbolekisi omubi kubantu abahola kancane
1.3 Izixhumanisi ezihlobene:
a Imalimboleko engalungile umane nje uchaza umboleko lapho lowo obolekwa khona kufanele akhokhe imali encane kunalokho ayekwenzile kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Lokhu kuzwakala kuhle kakhulu kumbolekayo, kodwa njengezinto zonke empilweni, ukubolekisa okungalungile kunezinzuzo ezithile kanye nokungalungile. Ngakho-ke, kufanele uzixelele ngokucophelela futhi ulinganise ubuhle nokuqhathanisana ngaphambi kokuba uphumelele.
Lezi zinhlobo ezimbili zemalimboleko engalungile
Mayelana nokubolekwa kwekhaya, igama lemali mboleko elibi liyaziwa isikhathi esithile.
Nokho, maduzane, kukhona okunye okukodwa kokubolekwa okungalungile, okuyinto ezuzisa ikakhulukazi umthengi omncane. Ukuze uthole amakhasimende amasha futhi uwagcine isikhathi eside, amabhange aqale hhayi nje kuphela amanani ezithakazelo ezenzelwe ukubolekwa kwemali mboleko ezincane kuze kufike ku-1000 Euro, kodwa ngisho nokuzifaka endaweni engafanele. Imalimboleko engalungile ivela.
Isimiso semalimboleko engalungile yesibambiso semalimboleko yesakhiwo
Noma ubani ofaka isicelo sokubolekisa imali yasebhange noma omunye umbolekisi kumele akhokhe imali kuphela ebolekiwe kodwa futhi nesithakazelo nezindleko ezengeziwe, isibonelo somngcwabo wokungena kanye nokubhaliswa komhlaba. Ukubolekwa kwemali ephakeme kanye nesamba ngaphezu kwama-euro ayizinkulungwane ezingu-15, amabhange nezikweletu ezibolekayo zingabhalisa kwirejista yomhlaba ukuze zivikele umboleko ukuze zithole imali yazo uma kungenjalo ukuboleka imali. Ngakho-ke impahla esetshenzisiwe ngumnikazi ibeka njengesibambiso.
Kodwa-ke, uma lowo obolekwayo manje edinga kuphela isikweletu semali sokulondoloza imali ngesamba esincane, esingaphansi kwe-15 yezinkulungwane zama-euro, lowo obolekisa angakwazi ukuyeka ukungena kwirejista yomhlaba. Kusukela ukubhaliswa kwezindleko zomhlaba kanye nezindleko ezidingekayo ezingabhaliswayo, ziqedwa. Ukulondolozwa manje kubangela inkokhelo engalungile.
Izibophezelo zomboleki uma kwenzeka umbolekisi omubi wokonga imali yokwakha
Kodwa-ke, uma umboleki ehlangabezana nezimo futhi ethola isikweletu esibi ngokuphathelene nomboleko wesikweletu sokwakha, kufanele ahlangabezane nemigomo ethile. Lokhu kufaka phakathi ukulinganisa okulinganiselwe ngesikweletu kanye nenzuzo ehleliwe nengunaphakade. Ngaphezu kwalokho, angeke abuyele noma abuye athengise impahla yakhe ngaphandle kokwazi umbolekisi kuze kube yikhokhwa ngokugcwele. Ngaphezu kwalokho, leyo ndawo ingase inganikezwa kwabanye abakweleta njengento ebaluleke kakhulu njengebambiso. Ekugcineni, ngesicelo sokuqala, ilungelo eliyisisekelo kumele libhaliswe kumuntu obolekayo, uma efisa kanjalo.
Isimiso sokubolekisa okungalungile kwabazuzi abancane
Kule ndlela ehlukile, lowo obolekayo kufanele aqede ukukhokha imali encane kunalokho ebolekiwe. Njengamanje, ukubolekwa kwe-intanethi kuhlinzekwa ukuthi kusebenze ngesilinganiso esingathandeki senzalo yesilinganiso se-0,4. Lokhu kusho ukuthi ku-a isamba semalimboleko I-1000 Euro ekugcineni idinga kuphela ukubuyiselwa nge-994 Euro. Kodwa-ke, ukugcinwa kwe-6 Euro obolekayo kufanele kwenziwe okuningi.
Imithwalo yemboleko uma kwenzeka umbolekisi omubi kubantu abahola kancane
Ekuqaleni, lokhu okuhlukile kokuboleka kwebhizinisi elibi kuzwakala ebhange, ngoba ekugcineni, kubuya kancane kunalokho okuthethelelwe. Okwenza amabhange aqhubeke enza inzuzo uma enikeza imiphumela emalimboleko emibi ngemikhuba yabantu. Amakhasimende awake abe nakho okuhlangenwe nakho okuhle nomkwereta ngokuvamile abuyele emuva. Ngaphezu kwalokho, umkhawulo wokuvimbela uyancishiswa ngaphambi kokuba kukhishwe isikweletu esisha, uma isiphetho sokuqala sesikweletu siba lula. Ngakho abathengi banamathele esikhungweni sezezimali bese babuya kamuva. Khona-ke uzothola isikweletu "esivamile," lapho inzalo edingeka khona futhi. Isikhungo sezezimali singakwazi futhi ukunqoba abantu abavame ukuboleka imali.
Ngaphezu kwalokho, isikhungo sezezimali siseduze kakhulu nedatha yomuntu siqu ebucayi yamakhasimende angakhona. Ngoba ukuthola isikweletu esibi, kufanele ufake wonke amaqiniso wezezimali etafuleni uma usebenzisa. Ngakho-ke abathengi baxwayisa ngale ndlela yokubolekisa.
Ngomboleko ombi, obolekayo angagcina imali. Ayikho imali efihliwe yokucubungula. Kodwa-ke, kumele aveze izimali zakhe. Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngesimiso semali mboleko engalungile, ungazikwazisa ngevidiyo.
Isihloko esilandelayoIsilinganiso senyanga